AMBOARY TSY AZO AMPITOMBOINA IREO PROGRAMA AVY AMIN'NY BARA FIASA - MALEMY
Amboary tsy azo atao ny manatsara ny programa avy amin'ny bara fiasa
Amboary tsy azo atao ny manatsara ny programa avy amin'ny bara fiasa: Ity dia olana manahirana iray manasaraka ny fisokafanan'ny mpampiasa fandaharana iray manomboka eo amin'ny menio fanombohana fa tsy misy na inona na inona, ny kisary ihany no hiseho eo amin'ny bara fizahana fa rehefa tsindrio ny sary famantarana dia tsy misy fampiharana miakatra ary raha misidina eo ambonin'ny kisary ianao dia afaka mahita ny fampiharana mihazakazaka eo am-baravarankely kely maso fa tsy afaka hanao na inona na inona amin'izany ianao. Na dia manandrana mampitombo ny varavarankely aza ianao dia tsy hisy izany ary hijanona ao amin'ilay varavarankely kely kely ilay programa.
Ny antony lehibe mahatonga ny olana dia ny fampisehoana misitatra izay toa miteraka an'io olana io fa tsy voafetra ho amin'izany satria miankina amin'ny rafitry ny mpampiasa sy ny tontolo iainany ny olana. Noho izany dia nanonona fomba vitsivitsy izahay hamahana ity olana ity, ka tsy handany fotoana intsony dia hojerentsika ny fomba hanamboarana Tsy azo atao ny manatsara ny fandaharana amin'ny olan'ny barazy miaraka amin'ireo dingana famahana olana etsy ambany.
matory foana ny windows
Fomba 1: Misafidiana efijery solosaina ihany
Fomba 2: Windows Cascade
Fomba 3: Atsaharo ny maody Tablet
Fomba 4: The Hotkey Alt-Spacebar
Ny tena antony mahatonga an'io lesoka io dia rehefa misy mpanara-maso roa alefa fa ny iray amin'izy ireo ihany no tafiditra ao ary mihazakazaka amina monitor iray hafa ilay programa izay tsy tena ahitanao azy. Tsindrio fotsiny ny famahana ity olana ity Windows Key + P avy eo tsindrio ny solosaina solosaina na ny efijery PC fotsiny amin'ny lisitra.
Toa izany Amboary tsy azo atao ny manatsara ny fandaharana amin'ny olan'ny bara amin'ny ankamaroan'ny tranga fa raha tsy misy antony tsy toa mandeha dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
1.Ray ny fampiharana izay miatrika ny olana.
2. Tsindrio havanana amin'ny tsorakaasa ary tsindrio eo Windows Cascade.
3. Ity dia hampitombo ny fikandranao ary hamaha ny olanao.
1. Tsindrio Windows Key + I hanokatra ny setting avy eo tsindrio System.
tsy afaka nahavita fanavaozana manafoana ny fanovana
2.Fidio ny menio ankavanan'ny safidinao Mode tablette.
3. Atsaharo ny maody Tablet na misafidy Ampiasao ny maody Desktop ambanin'ny Rehefa miditra aho.
4. Atsaharo ny PC-nao raha te hitahiry fanovana. Tokony izany Amboary tsy azo atao ny manatsara ny programa avy amin'ny bara fiasa olana fa raha tsy izany dia tohizo amin'ny fomba manaraka.
Andramo mihazona Windows Key + Shift ary avy eo tsindrio ny bokotra zana-tsipìkany havia in-2 na in-3, raha tsy mandeha izany dia andramo indray miaraka amin'ny bokotra ankavanana fa tsy.
Raha tsy nanampy izany dia tsindrio ny kisary programa izay tsy azo hafanaina hanomezana azy ny fifantohana indray tsindrio miaraka ny Alt sy Spacebar . Ity dia hiseho ny mandroso / manatsara ny menio , safidio Ampitomboina araka izay ary jereo raha manampy izany. Raha tsy izany dia sokafy indray ny menio ary safidio ny mihetsika dia andramo afindra ilay rindrambaiko ao amin'ny faritra manodidina ny efijeryo.
Ny fidirana amin'ny mpanonta dia nolavina tsy afaka nampifandray ny windows 10
Fix System Restore dia tsy nahomby tamim-pahombiazana
Ny File Explorer dia tsy manasongadina ireo rakitra na lahatahiry voafantina
Amboary ny famerenana amin'ny laoniny ny rafitra 0x80070091
Izay no nahombiazanao Amboary tsy azo atao ny manatsara ny programa avy amin'ny bara fiasa raha mbola manana fanontaniana momba an'ity torolàlana ity ianao dia aza misalasala manontany azy ireo ao amin'ny faritra maneho hevitra.
Windows 10 mihantona aorian'ny fidirana
afaka manavao ny mpamily nvidia windows 10
atombohy troubleshooter menio ho an'ny fisintomana maimaim-poana windows 10
zavatra tokony hatao alohan'ny hametrahana windows 10
hafatra mms tsy misintona android